KO123 – Page 40 – Myanmar Latest News
ရာဇဝင်ထဲက ရဲရဲတောက် အမျိုးသမီး(သို့မဟုတ်) ဗုဒ္ဓဘာသာကို နိုင်ငံတော်ဘာသာအဖြစ် ပြဌာန်းပေးဖို့ အဆိုတင်သွင်းခဲ့တဲ့ ဝဏ္ဏကျော်ထင် အမေဒေါ်ခင်လှ
ရာဇဝင်ထဲက ရဲရဲတောက် အမျိုးသမီး(သို့မဟုတ်) ဗုဒ္ဓဘာသာကို နိုင်ငံတော်ဘာသာအဖြစ် ပြဌာန်းပေးဖို့ အဆိုတင်သွင်းခဲ့တဲ့ ဝဏ္ဏကျော်ထင် အမေဒေါ်ခင်လှ (1910-1962 ) ================================= မြန်မာနိုင်ငံက အမျိုးသမီးတွေထဲမှာ ထင်းရှားကျော်ကြားပုံခြင်းမတူဘဲ နိုင်ငံအတွ က် ရဲရဲတောက်စံပြ အမျိုးသမီးတစ်ဦးရှိခဲ့တယ်……. တိုင်းပြည်လွတ်လပ်ရေးရဖို့ ဗမာပြည်လွတ်လပ်ရေး အမျိုးသမီးအဖွဲ့ချုပ်ကိုလည်း သူက ထူထောင်ခဲ့သေးတယ်………. မြန်မာအမျိုးသမီးတွေအနေနဲ့ မျိုးမစောင့်မိဘဲ နိုင်ငံခြားသားနဲ့လက်ထက်မိခဲ့မယ်ဆိုရင်တောင် သားသမီးတွေ အမွေဆက်ခံခွင့်ရဖို့အတွက် နိုင်ငံခြားသားများနှင့် …
တန်ခိုးကြီးဘုရားတစ်ဆူအား နေပြည်တော်တွင် မကြာမီ ဖူးမျှော်နိုင်တော့မည်။
ဘူမိဖဿမုဒြာထိုင်တော်မူကျောက်ဆစ် ဗုဒ္ဓရုပ်ပွားတော်မြတ်ကြီး၏ ပလ္လင်တော်အစိတ်အပိုင်းများအား ပြည်ကြီးမွန်ဖောင်တော်ဖြင့် လှေတော်ဝင်းခင်း၍ စတင်ပင့်ဆောင်ပူဇော်ခြင်း မဟာမင်္ဂလာအခမ်းအနားကို ဇူလိုင် (၃) ရက်နေ့က ကျင်းပခဲ့သည်။ နေပြည်တော်တွင် တည်ထားကိုးကွယ်မည့် ဘူမိဖဿမုဒြာထိုင်တော်မူကျောက်ဆစ် ဗုဒ္ဓရုပ်ပွားတော်မြတ်ကြီး၏ ပလ္လင်တော်အစိတ်အပိုင်းများအား ပြည်ကြီးမွန်ဖောင်တော်ဖြင့် လှေတော်ဝင်းခင်း၍ စတင်ပင့်ဆောင်ပူဇော်ခြင်း မဟာမင်္ဂလာအခမ်းအနားကို ယနေ့ နံနက်ပိုင်းတွင် မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး၊ မတ္တရာမြို့နယ် စကျင်ကျေးရွာအနီး၌ ကျင်းပပြုလုပ်ရာ မန္တလေးမြို့၊ အဝေရာရာမရန်ကင်းကျောင်းတိုက်ဦးစီး ပဓာနနာယက ရွှေကျင်ဂိုဏ်း …
သက်တော် ၁၁၆ နှစ်နောင်တခိုဆရာတော်-ဖူးထိုက်သူများဖူးကြပါနော်. သက်တော် ၁၁၆ နှစ် ကြာအင်းဆိပ်ကြီးမြိုနယ် နာင်တခိုဆရာတော်ပျံ လွန်တော်မူသွာပါပြီ😔😔 သီ လသမာဓိ ပညာနှင့်ပြည့်စုံပြီးအနာရောဂါ မရှိ ပကတိကျန်းမာရေးနှင့်ပြည့်စုံနေသော သက်တော် ၁၁၄ နှစ်ရှိ သက်တော်ရှည်ဆရာတော်ဘုရား ကရင်ပြည်နယ် ကော့ကရိတ်ခရိုင် ကျိုက်ဒုံမြို့နယ် နောင်တခိုအုပ်စု နောင်တခိုကျေးရွာ ရွာဦးကျောင်းဆရာတော်ဘုရားကြီးပါ ၁၉၈၀ခုနှစ်ကာလတွင် နောင်တခို နောင်တမန် ဝက်ဒုံကျေးရွာဘုန်းတော်ကြီးကျောင်းတို့တွင် တစ်ပါးတည်း တလှည့်စီကျောင်းထိုင်ခဲ့ရပါသည် …